दलबलसहित अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पुगे कमल थापा (फोटोफिचर)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा दलबलसहित अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पुगेका छन् । शुक्रबार थापा सहितका नेता–कार्यकर्ता बाजागाजासहित राष्ट्रिय सभागृहमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगेका हुन् । राप्रपाको नेतृत्वका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन प्यानलसहित चुनावी मैदानमा रहेका छन् । सो पार्टीको एकताको महाधिवेशन अन्तर्गत शनिबार मतदान हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
कमल थापा ओलीसँग असन्तुष्ट
काठमाडौं, ९ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट भएका छन् । उनले ओलीसँगको सहकार्य परिणाममुखी नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । थापाले राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेको उदासीनताको आलोचना गरिएको छ । प्रतिवेदनमा एमालेसँगको सहकार्य गर्ने निर्णय रणनीतिक रुपमा ठिक […]
कमल थापा सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने
काठमाडौं । नेकपा एमाले र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा सहकर्या गर्ने सहमति भएको छ । दुई पार्टीबीच ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने विषयमा पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार राप्रपा नेपालले सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न पाउनेछ । ती उम्मेदवार निर्वाचित भएपश्चात राप्रपा नेपालकै हुने सहमति दुई पार्टीले […] The post कमल थापा सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
कमल थापा एमाले पार्टी कार्यालयमा
काठमाडौं, ३० चैत । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा एमाले पार्टी कार्यालयमा पुगेका छन् । थापाले स्थानीय तहको चुनावमा सहकार्यको प्रस्ताव लिएर एमाले पार्टी कार्यालय गएको बुझीएको छ । उनले एमालेका दोस्रो तहका नेतासँग छलफल गर्ने बताइएको छ । उनले केहि दिन अघि सूर्य चिह्नबाट चुनाव लड्न सक्ने संकेत गरेका थिए ।
कमल थापा फेरि बने राप्रपा नेपालको अध्यक्ष
काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष कमल थापा फेरि राप्रपा नेपाल नामक नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बनेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष लाक्पा तामाङले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएपछि थापा उक्त पार्टीको अध्यक्ष बनेका हुन्। आइतबार थापाको नेतृत्वमा ६१ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएर नयाँ कार्यसमितिबारे आयोगलाई लेखेर पठाउने निर्णय भएको हो। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुर्यप्रसाद अर्यालले कमल थापाको नेतृत्वमा […]
कमल थापा पार्टीमा पुनःफर्किनुहुन्छ भन्ने आशा छ: जबरा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति समशेर जबराले हालै पार्टी परित्याग गरेका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पुनः पार्टीमा फर्किनेमा आशावादी रहेको बताएका छन्।...
आनन्दराज बतासको बचाउ गर्दै कमल थापा
काठमाडाैँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष कमल थापा बतास ग्रुपका मालिक आनन्दराज बतासको पक्षमा उत्रिएका छन्। सत्ता र राजनीतिक संरक्षणको सिँढीमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा कफीसप खोल्नेदेखि थुप्रै विवादास्पद ठेक्का हात पारेका बतासबारे समाचार प्रकाशित भइरहेका बेला थापाले बतासविरुद्ध अहिले चौतर्फी हमला भइरहेको बताएका हुन्। ‘भित्री रहस्य थाहा छैन। मैले चिनेको (आनन्द बतास) सामान्य अवस्थाबाट संघर्ष […]
काठमाडौं । राप्रपाको अध्यक्षमा पराजित भएपछि निर्वतमान अध्यक्ष कमल थापा पूर्वराजपरिवारमाथि आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । हालै पार्टीको सम्पन्न महाधिवेशनले राजेन्द्र लिङ्देनलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेपछि थापा पूर्वराजपरिवारमाथि खनिएका हुन् । महाधिवेशनको नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको परिणाम आइतबार बिहान आएसँगै थापाले आफूलाई हराउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लागिपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । तर, यसको केही […] The post हिमानी शाहमाथि पनि खनिए कमल थापा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
समर्थकको जुलुश लिएर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगे कमल थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिन कमल थापा दबलसहित राष्ट्रिय सभागृह पुगेका छन्। बुधबारदेखि सुरु भएको राप्रपाको महाधिवेशनमा आज मनोनयन दर्ता हुँदै छ। अध्यक्ष कमल थापा पक्षले फर्जी...
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पनि पुगे एमाले महाधिवेशनकाे उद्घाटन कार्यक्रममा
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पनि एमालेकाे दशौँ महाधिवेशनकाे उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवन पुगेका छन्
Shilapatra कार्तिक २०७८
कमल थापा र विप्लवबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबीच आज भेटवार्ता भएको छ । थापालाई भेट्न विप्लव आज बिहान थापा निवास बूढानीलकण्ठ पुग्नुभएको हो । भेटमा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका साथै सरकार र विप्लवबीच भएको ३ बुँदे सम्झौतालगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । बैठकबारे […]